Isi: Egwuregwu egwu na-esi na YouTube na Reddit | Site na Linux
Isi: Egwuregwu egwu na-esi na YouTube na Reddit
Omume nke oriri nke ọdịnaya na gụgharia usoro kwa afọ ọ na-aghọwanye ihe na-ewu ewu, ma ugbu a, ọ na-enwe mmetụta nke iche na mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na Ọgbaghara covid-19, ọbụna karị.
Na ubi nke na-ewe egwu n'ịntanetị, YouTube, nwere ike-atụle a kwasi-akparaghị ókè music n'ọbá akwụkwọ. Nke bụ ihe mere eji eme ọtụtụ ngwa (ndị egwuregwu) ntanetị ma ọ bụ desktọọpụ iji rie ọdịnaya egwu n'ịntanetị, dị ka «Igweisi».
Nuclear: Ezigbo egwu egwu egwu
N'ọgbọ egwu site gụgharia site na YouTube kpọmkwem, «Igweisi» pụtara maka ịbụ ọkụ, dị mfe ma rụọ ọrụ music player site na nkwanye, oghere na-emeghe na multiplatform, nke na-enye anyị ohere, n'etiti ọtụtụ ihe, ịfefe nkwụsị mgbasa ozi nke ọdịnaya a na-ege ntị.
Otú ọ dị, tupu mmiri abanye «Igweisi» Ọ dị mma ịmara na, n'oge ndị ọzọ, anyị ekwuola banyere ndị ọzọ yiri egwu egwu, ya bu, onye ihe omuma ya di na ntaneti site na nkwanye, dika "Nuclear", nke anyị na-akọwa nkenke na ohere ha dị ka ndị a:
"Nuclear bụ onye egwu egwu gụpụtara na GitHub n'okpuru akwụkwọ ikike "Affero GPL", yana n'okpuru mmụpụta mmepe akpọrọ "GNU / Linux First", nke pụtara na ngwa ahụ na-asọpụrụ nnwere onwe anyị, na-enye anyị ohere zuru oke na koodu isi mmalite , ka anyị nwee ike gbanwee ya ma nye aka na ọrụ ahụ. The ukara catchphrase maka ngwa na ya ukara website agụ na Nuclear bụ oge a Music Player lekwasịrị anya nkwanye free Akara ókwú." Nuclear: Ezigbo egwu egwu egwu
Ndị ọzọ na-akpali bụ:
MellowPlayer: ihe egwu na-egwu egwu
Udo: Otu ihe ọkpụkpọ mara mma ma dakọtara na igwe ojii
1 Ekweisi: Desktọpụ Player maka Linux
1.1 Gịnị bụ ekweisi?
1.2 Atụmatụ na arụmọrụ
1.3 Nbudata, Ntinye na nseta ihuenyo
Ekweisi: Desktọpụ Player maka Linux
Gịnị bụ ekweisi?
Dị ka gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, a kọwara ya ná nkenke:
"Ekweisi bụ a desktọọpụ music player kwadoro site na YouTube na Reddit."
Otú ọ dị, na ya weebụsaịtị na GitHub kọwaa ya n'ụzọ zuru ezu dị ka ndị a:
"Igweisi bụ ihe ọkpụkpọ egwu dị mfe maka Mac, Windows, na Linux nwere nchọgharị na YouTube, ihuenyo ụlọ nwere ndepụta ewu ewu site na ụdị na oge, ma kachasị mma, redio nke Reddit kwadoro. Ekweisi na-ewe egwu nke ihe karịrị 80 music sub-reddits na-akọrọ, na-akọwa ha, ma na-egwu ha na akpaghị aka. Ọ bụ a jụụ na nnọọ pụrụ iche ụzọ chọta ọhụrụ music dị ka ọ na-ahọrọ ndị ọzọ mmadụ dị ka gị na ọ bụghị site algọridim."
Ọ bụ multiplatform: Ọ dị maka Windows, Linux (Debian, Redhat) na MacOs. Enwere ike iwu ya site na koodu isi na gburugburu ebe obibi.
2 Anya anya dị: Ọ nwere isiokwu ngosi 2: Ọchịchịrị na Ìhè. N'oge na-adịghị anya, ọ ga-etinye nke ya na nke ya.
Mmekọrịta na Last.fm: Enye ohere otu-pịa mwekota na kwuru na-ewu ewu na-elekọta mmadụ music ọrụ. Pịgharịa n'ime songs dị na-enye nhọrọ dezie ozi.
Njikọ onwe na nchebe: Na-ekwe nkwa na a na-ebufe data niile, nzere na kuki site na njikọ SSL echedoro, iji chekwaa data niile na netwọkụ ahụ.
Open isi: Iji hụ na nchekwa na nkwụsi ike, akụkụ buru ibu nke isi ihe ekweisi na-emeghe.
Mmekọrịta Cloud: Ihe niile ejirila dị n'igwe ojii, yabụ naanị site na ịbanye, egwu niile ejirila alaghachi. Iji mekọrịta ngwa ahụ na akaụntụ YouTube nke onye ọrụ, a ga-agbaso usoro ndị a usoro.
Nbudata, Ntinye na nseta ihuenyo
Latestdị ya kachasị ọhụrụ bụ nọmba 3.3.0 na mgbe ebudatara, na nke anyị usoro ".deb", ma wụnye ya "Apt" ma ọ bụ "dpkg", «Igweisi» yiri nke a:
Onwe m, ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu, n'ihi na m zere ige ntiwapụ mgbasa ozi, site na ọdịnaya ọ bụghị naanị egwu, mana site na ọdịnaya ọ bụla nke YouTube, ọmụmaatụ, Ọwa na Software efu, Isi mmalite na GNU / Linux na m na-ahụkarị. Na ihe niile ọ dịghị mkpa ka nbanye na ngwa, nke bụ naanị ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ iji Mbido menu na nhọrọ njikọ y amasị.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Headset», obere na bara uru ọkpụkpọ egwu ọdịnaya nke ịntanetị YouTube na Reddit, oghere na-emeghe na multiplatform, nke na-enye anyị ohere, n'etiti ọtụtụ ihe, ịhapụ ịgba ọsọ mgbasa ozi; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Isi: Egwuregwu egwu na-esi na YouTube na Reddit
Achọpụtara ihe dị nfe 17 na azụ azụ na ngwaọrụ FiberHome
Utu Pi Pico: slimmer ọhụrụ na ọnụ ala SBC